Aakar May 18, 2008
भारतीय कवि रविन्द्रनाथ टेगोर ले भने जस्तै, म पनि यस्तै वासस्थान को कल्पना गरिरहेछु, तर अहँ सुन्दर र शान्त देश अब कहिले पनि पाउन सक्दिन जस्तो लागरे आउँछ । हामी नेपाली जनता सँधै ठगिएका छौँ, नेतृत्व वर्गबाट अथवा भनौँ शासक वर्गबाट । कहिले काँही सोच्छु, यो ब्रम्हाण्ड कति विशाल छ, पत्यार गर्न पनि गाह्रो छ कि, यो ब्रम्हाण्ड प्रति सेकेन्ड हजारौँ किलोमिटरको दरले फैलिरहेको छ । ब्रम्हाण्ड को आकार कति मात्रा मा छ, अनुमान गर्न पनि सँकिदैन, अनि यहाँ कति तारा, ग्रह र उपग्रहहरु छन्, कसैलाई थाहा छैन । हामीले विश्वास गर्ने गरेका छौँ कि पृथ्वि एउटा सानो ग्रह मात्र हो, यस्ता ग्रहहरु त अनगिन्ति छन् । तर पनि हामी आफैँ बिच लडाई गरिरहेका छौँ, मेरो र तेरो भन्दै यो पृथ्विमा रहन को लागि । यो हामी सबैको साझा घर हो, भन्ने कुरा हामी बिर्सदैँ गइरहेको आभास हुनथालेको छ ।
दिनहुँ सुनिने गरेका हत्या हिंसा का घटना ले मनमा एक प्रकार को वितृष्णा पैदा गरेको छ, मेरो मन मा । कुनै नजानिँदो भार ले थिचिरहेको छ । १२ वर्ष नेपाल मा रगत को खोलो बगेको सबैलाई थाहा छ, त्यसबाट कति नेपाली को घर उजाड भयो, कति को जीवन बर्दाद भयो, त्यसको लेखाजोखा नै छैन । कोही दुश्मन का नाम मा, कोही सुराकी का नाम मा, कोही शोषकी को नाममा त कोही सामन्ति, शाषक को निहुँमा अपहरण गरिए,कुटिए,हत्या गरिए । जो जाने गइहाले बाँच्ने पनि चैन ले बाँच्न पाएनन् ।
१२ बर्षको जनयुद्ध को कारक मानिएको माओवादी शान्ति प्रक्रिया मा आऊँदा, कुन चाँही नेपाली जनताले शान्त र समुन्नत नेपाल को कल्पना गरेन होला र ? तर अझैसम्म पनि हाम्रो कल्पना ले आकार पाएको छैन । संविधान सभाको चुनाव पनि भयो, र परिणामत: माओवादी एक ठूलो दल पनि भयो । तर उसको कृयाकलाप भने सुध्रन सकेन, उनीहरु सुध्रन नचाहेका हुन् या सुध्रन नसकेका हुन् भन्न चाँही कठिन नै छ । अझै पनि दिनहुँ ज्यादती का घटनाहरु सुन्न र पढ्न पाइन्छ, लाग्छ कानुनीराजको ठाडो उपहास भैरहेको छ ।
जेठ १५ गते नेपाल गणतन्त्रात्मक राज्य घोषणा हुँदैछ त्यसबेला प्रतिक्रान्ति हुनसक्ने खतरा औँल्याउँदै नेकपा माओवादीका अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डले सबै जनतालाई सडकमा ओर्लन आग्रह गरेकाछन् । विश्वास गरौँ, प्रतिक्रान्ति हुँदैन । जनताले विश्वास गरेर साथ पनि दिन्छन् तर किन माओवादीले तिनै जनतालाई पिडा दिन्छन् ? किन उनीहरु कानुन सबै आफ्नो हातमा लिएर वितण्डा मच्चाउँछन् ? उनीहरु सबैको मन जित्ने काम किन गर्दैनन् ?
तर एउटा कुरा के प्रष्ट हो भने उनीहरुको सय राम्रो कामलाई एउटा नराम्रो कामले मेटिदिने गरेको छ, उनीहरुलाई पनि यसैलाग्दो होला, तर किन त्यो एउटा गल्ति सँधै दोहोर्याइरहन्छन् ? अरुले जति नै भनेपनि आफ्ना संगठनहरुलाई विघटन नगर्ने भएका छन्, विघटन नगरुन् कम्तिमा नियन्त्रण त गर्न सक्छन् होला ? तर अहँ, उनीहरु त झन् हौसला पो थपिरहेकाछन्, तिमीहरुले राम्रो काम गय्रौ भन्दै !
अब आशा गरौँ, जेठ १५ पछिका दिनमा कमरेडहरु सत्ताको पछि मात्र नदगुरी, आफ्ना बोलीलाई व्यवहारमा उतार्नेछन् । आफ्ना संगठनलाई नियन्त्रण मा राखी साँच्चैको नयाँ नेपाल बनाउने छन् र हत्याहिंसाको राजनितीबाट टाढै रहनेछन् अनि मुख्य कुरो जनताको मानवअधिकार को ग्यारेन्टि गर्नेछन् । टेगोरले कवितामा भने जस्तै हाम्रो देश यस्तो ठाउँ बनोस जहाँ जनताले कहिले डर लिएर बाँच्नु नपरोस, जनता स्वतन्त्र भएर बाँच्न पाउन ! हामीले चाहेको शान्ती हामीलाई कहिले दिने त कामरेड ???
badri May 19, 2008 at 7:04 AM
जनताले विश्वास गरेर साथ पनि दिन्छन् तर किन माओवादीले तिनै जनतालाई पिडा दिन्छन् ? किन उनीहरु कानुन सबै आफ्नो हातमा लिएर वितण्डा मच्चाउँछन् ? उनीहरु सबैको मन जित्ने काम किन गर्दैनन् ?
The reason is that maoist wants only the power and rule to the people of Nepal.....nothing more than that....
Dilip Acharya May 19, 2008 at 2:02 PM
आफ्ना संगठन, जसको बलबुताको कारण आज उनिहरु शक्तिमा छन, त्यसको विघटन त पक्कै पनि गर्दैनन् यिनिहरुले । तर तपाईले भने जस्तै नियन्त्रण वा निगरानी मात्रै गरे पनि राम्रै हुन्थ्यो ।
होईन भने क्षणिक रुपमा माओबादिलाई यो 'उग्र झुण्ड' को 'उग्रता' ले आफ्नो हैकम र दबदबा कायम राखे जस्तो लागे पनि कालान्तरमा यहि 'उग्रता' ले पुरै दललाई नै डुबाउने कुरो चाहिँ पक्का छ।